पुजा गर्नु अगाडी जानु पर्ने ५ कुरा ….के के हुन ? जान्नुहोस ! – Khabar PatrikaNp
पुजा गर्नु अगाडी जानु पर्ने ५ कुरा ….के के हुन ? जान्नुहोस !
August 25, 2020 347
घर या मन्दिरमा पूजा या प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईले केही नियम पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । नियम भए धर्म हुन्छ र धर्म भए जीवन हुन्छ । अतः नियमानुसार नै कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने उचित हुन्छ ।
दोस्रो, शरीरका आन्तरिक अंगलाई शुद्ध गर्नका लागि योगमा कैयौं उपाय उल्लेख गरिएको छन् । जस्तै शंख प्रक्षालन, नेती, नौलि, धौती, कुंजल, गजकरणी, गणेश क्रिया, अंग संचालन आदि ।उपरोक्त करिकाबाट स्नान गर्न सकिने अवस्था छैन भने सामान्य तरिकाले स्नान गर्ने बेला तपाईले आफ्ना सबै १० छिद्रलाई राम्रोसँग सफा गर्नु पर्नेहुन्छ । १० छिद्रमा आँखा र कानका २ दुई छिद्र, कानका २ छिद्र, मुख, नाभि (नाइटो) र गुप्ता-ङ्ग लगायत हुन् ।
तपाईले सन्ध्यावन्दन, पूजा या आरती गर्ने बेला शरीरमा एउटै कपडा लगानुहोस् । त्यो हो सिलाइ नगरिएको शुद्ध सेतो कपडा । किनकी प्राचिन कालदेखि चलेको नियम यही हो । हिन्दु धर्ममा कुनै पनि प्रकारको पूजा–अर्चनाको बेला श्रद्धालुलाई धोती लगाउन अनिवार्य गरिएको छ । प्राचीनकालमा धोती नलगाएर गरिने पूजा–अर्चनालाई पुर्ण मानिदैनथियो ।धोती प्राय सूती कपडाबाट बनेको हुन्छ । जो हावादार र सुविधाजनक पनि हुन्छ । धोतीका कारण शरीरका रोमछिद्रमार्फत हामीलाई शुद्ध प्रायवायु मिल्छ । यसलाई पहिरिए पछि सात्विक र निर्मल भाव उत्पन्न हुन्छ ।
शुद्धि र आचमन:
Prevनजन्मँदै मृत्युलाई जित्न सफल रहेका बालक जसले गर्भनिरोधक कपर टि हातमा लिएर जन्मिए ! विश्वलाई नै चकित पारे !
Nextएका बिहानै माता मनोकामना माइको दर्शन गरी आज भाद्र ९ गते मंगलबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस
कोरोना भाइरस कोभिड-१९ बाट आज थप १ हजार २४६ जनामा संक्रमण पुष्टि
हवाइ टिकट काटेका १० यात्रुमध्ये ४ यात्रुमा कोरोना देखिएपछि ६ यात्रु बोकेर सिता एयरको बिमान ताप्लेजुङ्गको सुकेटार विमानस्थलमा अवतरण
भाइरल मनकामना धामको बगरमा रहेको सति ढुङ्गा (भिडियो हेर्नुस्)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20279)